ဟာသလေးတွေပါ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဟာသလေးတွေပါ..
Posted by Yin Nyine Nway on Jul 16, 2010 in News |2comments
၂၁ ရာစုအစမှာပဲ စက်ရုပ်တွေဟာလူတစ်ယောက်လိမ်တယ်မလိမ်ဘူး ဆိုတာကိုမျက်နာကြည့်ပြီးသိနိုင်
အောင် တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ အဲဒီစက်ရုပ်ဟာလိမ်တဲ့သူကိုချက်ချင်းပါးထရိုက်တာပါပဲ။ မယုံဘူးလား… အောက်ကအဖြစ်အပျက်ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။
ကိုဇော်ဂျီ ။ ။ သားမင်းဘာလို့ကျောင်းနောက်ကျတာလဲ။
မောင်မောရစ် ။ ။ ဒီနေ့ကျောင်းကအချိန်ပိုရှိလို့နောက်ကျတာအဖေရဲ့။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲ ဘေးမှာရှိနေတဲ့စက်ရုပ်က မောင်မောရစ်ပါးကိုရိုက်ထည့်လိုက်သည်။
ကိုဇော်ဂျီ ။ ။ ဒီစက်ရုပ်က လိမ်ပြောတာကိုအာရုံခံစားနိုင်တဲ့စက်ရုပ်ကွ။ မှန်မှန်ပြောစမ်း။ လိမ်ပြောရင်မင်းကိုပါးထပ်ရိုက်လိမ့်မယ်။
ကိုဇော်ဂျီ ။ ။ ဘာရုပ်ရှင်လဲ။
မောင်မောရစ် ။ ။ “The Ten Commandments” ဇာတ်ကားပါ။
မောင်မောရစ် ။ ။ ဟုတ်…ဟုတ်.. Sex Queen ဇာတ်ကားပါ။
ကိုဇော်ဂျီ ။ ။ မင်းမရှက်ဘူးလားကွ ဒါမျိုးဇာတ်ကားကြည့်တာ။ မင်းအသက်အရွယ်လောက်တုန်းက ငါဒါမျိုးရှက်စရာဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး။
ပွင့် ။ ။ ရှင်လည်းလိမ်တာပါပဲလား။ အင်းလေ.. ရှင်နဲ့တူမှာပေါ့ အဲဒါရှင့်သားပဲလေ ။
ဒီတစ်ခါစက်ရုပ်ဧ။် ပွင့်ကိုပါးရိုက်ချက်ကား အသံအကျယ်ဆုံးဖြစ်တော့သည်။
Sucide ဟုခေါ်သော မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်မှုသည် ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုမြောက်ပြီး အပြစ်ဒဏ်မခံရသောပြစ်မူတစ်ခုဖြစ်ပေသည် ။ အကြောင်းမူ …. သေသွားပြီးဖြစ် ၍ပြစ်ဒဏ်မစီရင်ရခြင်းကြောင့်
ဖြစ်ပေသည် ။ မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံစည်မှု၏ Common cause မှာ အကြွေးများလွန်း၍ နောက်ဘ၀မှပဲ ဆပ်ပါတော့မယ်ဆိုသူကတစ်မျိုး ၊ အသည်းနှလုံးထဲက သေမတတ်ချစ်ပါသည်ဆိုသော ကိုယ့်ရည်းစားက Talky တွေပွါး ညာစား ပြီးကာမှ လင်နောက်လိုက်ပြေးသွားခြင်းက တစ်သွယ် ၊ မိန်းမတို့ ဣနြေ္ဒ ရွံ့ပိတ်လို့မရ ( အဲ ) ရွှေပေးလို့မရ ဆိုသည့်အတိုင်း မိမိ၏ဣနြေ္ဒ စိန်ရွှေပါအပျက်ချူ ၊ ကလေးတစ်ယောက်ကို Parting Gift အဖြစ် လက်ဆောင်ပေးပြီး ခြေရာဖြောက်သွားတဲ့ ယောကျာ်းကြောင့် အရှက်ကိုအသက်နဲ့လဲမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ Parking ဖွင့်ပြီးသမီးပျိုများကလည်း တဖုံစုံလှပါပေသည် ။ သို့ရာတွင် Sucide case တိုင်း Successful done တော့ ဖြစ်သည်မဟုတ်ပေ ။
တခါက ရွာတစ်ရွာတွင် သေချင်လောက်အောင်စိတ်ညစ်နေသော လူငယ်တစ်ယောက် မိမိကိုယ်ကို သတ်သေရန် မြစ်ကမ်းဘေးသို့ဆင်းလာသည် ။ သူ၏စီမံပုံကားအကွက်ကျလှသည် ။ ရေထဲတွင်ထိုးထွက်နေသော သစ်ကိုင်းတွင် ကြိုးကွင်းကိုပြင်ဆင်ထားသည် ။ လက်ထဲတွင် အဆိပ်ပုလင်းနှင့် သေနတ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသည် ။ လည်ပင်းကို ကြိုးပေါ်တွင်အသင့်အနေအထားဖြင့် နေရင်း အဆိပ်ကိုမော့သောက်ချလိုက်သည် ။ ထို့နောက် ပြုတ်ကျခဲ့လျှင်လည်း ရေနစ်သေရပေမည် ။ ဤသို့ဖြင့် အဆိပ်သောက်ပြီး နာထင်ကိုသေနတ်ဖြင့်ပစ်လိုက်သည် ။ ကြောက်လန့်နေချိန်မို့ ပစ်မှတ်လွဲပြီး
( ကျန်စစ်သားကို အနော်ရထာလှံပစ်သကဲ့သို့ ) ကြိုးကိုသွားထိသည် ။ ကြိုးပြတ်ကျ ၍ ကြိုးပေါ်ခေါင်းမှေးလိုက်ချိန် အရှိန်လွန်ကာ ရေထဲသို့မှောက်လျှက်ကျလေသည် ။ ၀မ်းဗိုက်ကိုရေကရိုက်လိုက်သဖြင့် သောက်ထားသောအဆိပ်လည်း ဗွက်ကနဲပြန်အန်တော့သည် ။ ထိုအခါ အနီးမှ လူတစ်ဦး လှမ်းတွေ့ကာ ရေထဲကဆင်းကယ်၍ ဆေးရုံတင်ပေးရာ အသက်မသေတော့ပေ ။ သြော်…… သေချင်တိုင်းလည်း သေလို့မရပါလား ။
ပထမအမျိုးသမီး။ ။ဒီထဲမှာလူရှင်းတယ် ၀င်ပေါက်လိုက်ကြရအောင်…။
အဲဒီလိုနဲ့မူးမူးနဲ့ရူးရူးပေါက်လိုက်ကြတာ ခြေထောက်တွေစိုစိုရွှဲကုန်ပါလေရော။
ဒုတိယခင်ပွန်း။ ။အေး..မင်းကဘာဟုတ်သေးလဲကွာ..ငါ့မှာရူးတောင်ရူးချင်နေပြီ ။
ဘာတဲ့ “ခင်ဗျားကိုကျုပ်တို့တပ်စုတစ်ခုလုံးကမှတ်မှတ်ရရရှိနေမှာပါ“ တဲ့ကွာ။ ။
ရယ်လိုက ရယ် . . ပြုံးလိုက ပြုံး
“ဘူးတာရုံကိုသွားဖို့ အတိုဆုံးလမ်းကို ကျေးဇူးပြုပြီး ညွန်းပြစေချင်ပါတယ်”
“၀မ်းနှုတ်ဆေးစားထားတဲ့ လူတစ်ယောက်က တော်ရုံ ၊ တန်ရုံနဲ့
ဘယ်ချောင်းဆိုးရဲတော့မလဲ ၊ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ”
ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖောက်ခိုးနေသော သူခိုးကို ရဲသားက လက်ပူး လက်ကြပ်မိသွားသည်။
ရဲသား – “ မင်းဘာဖြစ်လို့ ဒီဆိုင်ကိုမှ ဖောက်ခိုးရသလဲ”
သူခိုး – “ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ နီးလို့ပါ ၊ သိတဲ့အတိုင်းခေတ်က မကောင်းတော့
အိမ်ကိုပစ်ပြီး အကြာကြီး မသွားချင်လို့ပါဗျာ”
လူငယ်“ဆံပင်ညှပ်နေတုန်းမှာ ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော် နှာခေါင်းကိုကိုင်ထားရတာလဲဗျာ”
ဆံပင်ညှပ်ဆရာ “အော် ဒါလား ၊ မင်းမျက်နှာ ဘယ်ဘက်မှာ ရှိလဲဆိုတာ
ဇိမ်ခံ သင်္ဘောပေးတွင် လိုက်ပါလာလာ ခရီးသည်များအား ဖျော်ဖြေရန်မျက်လှည့်စရာ
တစ်ဦးက မျက်လှည့်ပြသည်။ သင်္ဘောပေါ်မှ ကြက်တူရွှေးသည် မျက်လှည့်ဆရာ
မျက်လှည့်ပြသည့်အခါတိုင်း အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးလေသည်။
“ သူထုပ်ပြတဲ့ ယုန်ုဟာ အစစ်မဟုတ်ဘူး ၊ ပလစ်စတစ်” ထိုသို့ မျက်လှည့်စရာ၏
လျို့ဝှက်ချက်များကိုကြက်တူရွှေး က ဖော်ထုတ်နေသည်။မျက်လှည့်စရာလဲ
အောင့်အီးသည်းခံ နေရလေသည်။တစ်နေ့တွင် သင်္ဘောနစ်မြုပ်ပြီး မျက်လှည့်ဆရာ ၊
ကြက်တူရွှေး ၊ သစ်သားတစ်ချပ်သာ ရေပေါ်တွင် ကျန်နေ၏။ မျက်လှည့်ဆရာလည်း သစ်သားပြားကို
ရေပေါ်တွင် ကိုယ်ဖော့နေလေသည်။ထိုအခါ ကြက်တူရွှေးက “ ကျွန်တော် အရှုံးပေးပါပြီ
ခင်ဗျာ ၊ ဒါပေမယ့် သင်္ဘောကို ခင်ဗျားဘယ်မှာ ၀ှက်ထားသလဲဆိုတာတော့
“ချို့ယွင်းချက် တစ်ခုတည်း ဟုတ်လား ၊ဒါဆိုကံကောင်းတယ်ဆိုရမယ်၊ ဒါနဲ့ဘာချို့ယွင်းချက်လဲ”
10. ချစ်သူတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်
မိန်းမ-“အပျို ဘ၀တုန်းကများ ကျွန်မကို ပိုးပန်းတဲ့ လူတွေ အများကြီးပဲ ၊
ရယ်ရတာခွက်ထိုးခွက်လန်ပဲ ။ thanks ပါ။